प्रदर्शनको ९ दिन अघि मिडियामा दयाहांग राई - Enepalese.com
प्रदर्शनको ९ दिन अघि मिडियामा दयाहांग राई
इनेप्लिज २०७४ चैत २२ गते १०:५० मा प्रकाशित
प्रदर्शनको लागि तमतयार भएको सिनेमा “नेप्टे” को प्रमुख कलाकार दयाहांग राई अहिले निकै व्यस्त छन् । सिनेमाको प्रचार प्रसारको लागि दौडधुप गर्न नपाएका राई अहिले आफ्नै निर्देशनमा रहने नाटकको दैनिक रिहलसलमा रहेका र छन् यस कारणले पनि म व्यस्त भएको उनले बताए ।
नेप्टे प्रदर्शनको ९ दिन पहिलो पटक उनि फिल्म नेप्तेको लागी मिडियामा सार्वजनिक भएका हुन् । उनले पत्रकारहरुको दोहोरो प्रश्नको जबाफ पनि दिएका थिए । राई यस फिल्म मार्फत नेपाली सिनमा नगरीमा खलनायकको रुपमा देखा पर्ने छन् उनले भने . म जिन्दगीको हरेक पाटो औलाऊंन सक्छु र यो पनि मेरो कोसीस हो . उनले सिनेमाको बारे यसो भनेका छन् । भिडियोमा ,
पोस्टरमा भएको “हरियो डलर डलरले बिगार्यो कलर अब पैसा बर्शिने भयो बररर” बोलको सम्बाद निकै हिट छ र ट्रेलरमा भएको “मायामा दाई न साई ‘ बोलको सम्बाद पनि निकै हिट छ । फिल्मलाई निर्देशक देव कुमार श्रेष्ठले निर्देशन गरेका हुन् । किरण माइकलको पटकथा एवं संवाद रहेको फिल्ममा रोहित आफैंले कथा लेखेका छन् । कलाकार रोहित रुम्बाद्वारा निर्मित ‘नेप्टे’ लाई हरी घले लामाले खिचेका हुन् । फिल्ममा सन्तोष राज , बाबु बोगटी ,ओम सुनारको संगीत रहेको छ ।
म रिल लाईफमा खलनायक हू / नेप्टे मेरो कोसिस हो निकै राम्रो भएको छ ” Dayahang Rai asaKhal Nayak